Isiokwu a na-akpọ “The 25 kasị mma uzo ozo ka Photoshop” e dere site Samuel Gibbs, n'ihi na theguardian.com on Thursday 19 February 2015 12.02 UTC
Adobe Photoshop si dị ugbu a 25 arọ we bụ achọghị ịzụ n'ọtụtụ kasị elu nke foto edezi. Ma, na £ 8,57 / ọnwa, ọ bụ nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị oké ọnụ karịa ọtụtụ ndị nwere ego,, ya mere ebe a na- 25 uzo ozo maka 25 afọ nke photoshoppery.
The ise best ...
Pixelmator – kasị mma maka Mac
Pixelmator bụ otu n'ime ndị kasị mma n'ihi na OS X. Foto: Pixelmator
Pixelmator bụ achọghị ịzụ kasị mma foto nchịkọta akụkọ on a Mac. Ọ ejiri ọbụna ndị kasị ibu photos na ala, replicates dị ka ọtụtụ Photoshop ngwaọrụ dị ka na-adịkarị chọrọ, nakwa dị ka Photoshop file support, ma ihe ndị magburu onwe agwọ ngwá ọrụ nwere ike ịkọwa ihe bụ gburugburu ya ma jupụta na zuru ezu.
Magburu onwe ya n'ihi ngwa emetụ elu nke photos ka zuru ezu mkpachapụ maka novices na Uru myiri. E nwere ọbụna a gbasiri nnọọ ike £ 7,99 iPad Pixelmator ngwa na ọtụtụ n'ime ụdị ngwá ọrụ na ala nke iji na-eme ka ndị Mac ngwa oké.
Paint.net - kacha mma maka Windows
Microsoft Agba on Steroid. Foto: Paint.net
Paint.net malitere ndụ dị ka a dị mfe nnọchi maka Microsoft Agba, ma, ghọrọ usoro na ọhụrụ atụmatụ dị ka multiple n'ígwé na elu ndị ọzọ foto edezi ngwaọrụ. Taa ọ bụ otu n'ime ndị kasị free foto editọ maka Windows, na a ruru eru feature set nke na-akwụsị nnọọ mkpụmkpụ nke ụfọdụ nke ọrụ aghụghọ ngwaọrụ.
Magburu onwe ya n'ihi ngwa edits, kụrụ n'ubi na ihe ka ọtụtụ n'ihe kwa foto edezi. Nke ka nke, ọ bụ free.
Adobe Lightroom – kasị mma maka nnukwu-ijikwa photos
Adobe Lightroom 5 dị ka a standalone ngwaahịa ma ọ bụ dị ka akụkụ nke ụlọ ọrụ ahụ si Creative Cloud ndenye aha na ọrụ. Foto: Adobe
Achọghị ịzụ kasị mma foto manager, Adobe Lightroom nwere ezu ngwaọrụ, ọbụna n'ihi na ndị ọkachamara, iji zere inwe ga-emeghe a iche iche image nchịkọta akụkọ, gụnyere ụfọdụ nke Photoshop si agwọ ọrịa ma na mkpachapụ ngwaọrụ. Ọ na-nwere a siri ike collection of ogbe nhazi na akpaghị aka mgbazi ngwaọrụ dabere na ọkụ, oghere na igwefoto ụdị, nke na-eme ya ngwa ngwa n'ihi na ọtụtụ ọrụ.
Aviary Photo Editor – kasị mma maka mobile
Aviary maka iPad, iPhone na gam akporo Foto: aviary
aviary bụ a siri ike image nchịkọta akụkọ na onye gbasiri nnọọ ike image aka-elu na resizing ngwaọrụ, ugbu a ekesịpde site Adobe. Ọ bụ n'ụzọ kwụ ọtọ interface-eme ka ọ dị mfe iji na nwere ihe ndị ọzọ na-enye karịa ọtụtụ mobile editọ echu Instagram-style nzacha.
Autodesk Pixlr – kasị mma dị na nchọgharị
Free – Windows, oS X, Android, iOS na web
Pixlr maka Mac. Foto: Autodesk
Pixlr bụ a free ezu foto nchịkọta akụkọ na a siri ike ngwá ọrụ set nke fọrọ nke nta ọ bụla oru ngo. The web ngwa bụ otu n'ime ndị kasị n'ụzọ zuru ezu na-apụta, mgbe ya mobile na desktọọpụ ngwa ọdịnala nwekwara siri ike. Ụfọdụ n'ime Pixlr kasị elu atụmatụ achọ a $15 a afọ ndenye aha, ma o nwere ná nkwado nke Autodesk, Ndinam ụfọdụ ndị kasị mma na kọmputa-aided imewe ngwaọrụ.
Ndị kasị mma nke fọduru ...
PaintShop pro – Photoshop si ogologo oge ndorodoro. Foto: Corel
Photoshop si ogologo guzo ndorodoro. PaintShop pro bụ dị ọnụ ala karịa ya juggernaut nke a na-ama ma ihe yiri nke ahụ kpọmkwem. Ọ kọrọ ụfọdụ n'ime Photoshop kasị elu atụmatụ, na na bettered site na ụfọdụ nke ya ọhụrụ mgbe-free asọmpi, kama ọ bụ ka a ruru eru nchịkọta akụkọ.
PhotoPlus bụ a siri ike niile gburugburu image nchịkọta akụkọ nke Windows si ụlọ ọrụ na-kere mmekọrita Photo maka OS X. Ọ nwere ezigbo set ngwaọrụ, gụnyere oghere mgbazi ngwaọrụ ndị ọzọ ọkacha mmasị nke foto. The naanị downside bụ na ọtụtụ n'ime elu ngwaọrụ achọ ihe ntuziaka mkpachapụ karịa ndị ọzọ na programmụ na ya mere na ọ bụghị dị ka mbido friendly.
Photoshop Ihe bụ Adobe si ịkpụ-ala image nchịkọta akụkọ ahụ na-agụnye ọtụtụ ndị ngwaọrụ ndị na-eji site na zuru Photoshop maka a nta na-eri. Foto: Adobe
Photoshop si ịkpụ-ala na nwa nwanne nna Ihe akala mma n'ụzọ dị ịrịba ama n'elu ikpeazụ na nwunye nke afọ site a ngwá ọrụ iji zere ka a foto nchịkọta akụkọ n'ihi na onye ọ bụla ọzọ. O nwere ọtụtụ nke otu ngwaọrụ dị ka ya ibu nwa-nne-, save for the advanced Content Aware Fill and a few other professional tools. Solid for most tasks, although free or cheaper tools with similar features are available.
Affinity Photo attempts to be Photoshop on a budget, but not dumbed down. Ọ bụ ngwa ngwa, packed with advanced tools and is aimed at professionals. Part of that tool set is end-to-end CMYK 16-bit per channel editing, RAW processing and a Photoshop Content Aware Fill-like tool called Inpainting.
Apple’s professional photo management and manipulation software, but Aperture will be replaced by Apple Photos in the near future. Foto: Apụl
Photos is the successor to Aperture and iPhoto, due for release in the spring. Foto: Apụl
Free – Android, iOS na web
← Sony SmartWatch 3 Ndenye Review [Na] Next Post →